Ukuguquka kwesimo sezulu kuzokwenza uchungechunge lokudla lungasebenzi kahle | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kunemithelela emibi kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, emahlathini, kubantu kanye, nakwimithombo yemvelo. Kungathinta ngendlela eqondile ukuncipha noma ukwehla kwemithombo noma ngokungaqondile ngochungechunge lokudla.
Kulokhu, sizokhuluma ngakho umphumela wokuguquka kwesimo sezulu ochungechungeni lokudla. Ukuguquka kwesimo sezulu kuluthinta kanjani uchungechunge lokudla nathi?
1 Funda ngochungechunge lokudla
2 Labo abathinteka kakhulu ngokuguquka kwesimo sezulu
Funda ngochungechunge lokudla
Kwenziwe ucwaningo eNyuvesi yase-Adelaide ethole ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kunciphisa ukusebenza kahle kochungechunge lokudla ngoba izilwane zinciphisa amandla azo okusizakala ngezinsizakusebenza. Ucwaningo luye lwagcizelela ukuthi ukwanda kwe-CO2 yikhona okubangela i-acidification futhi yilokhu kukhuphuka okuzonyusa umkhiqizo ezindaweni ezahlukahlukene zochungechunge.
Ngaphandle kwalokhu okutholakele, kuphinde futhi kwanquma ukuthi ukwanda kwezinga lokushisa kwamanzi kuzosula umkhiqizo kwezinye izingxenye zochungechunge lokudla. Lokhu kungenxa yengcindezi ehlushwa yizilwane zasolwandle. Yingakho kuzovela izinkinga kancane kancane ochungechungeni lokudla lokho kuzodala ukubhujiswa kwalo.
Lokhu kuqhekeka kuketango lokudla kungaba nemiphumela emibi kakhulu kuzinto eziphilayo zasolwandle, ngoba esikhathini esizayo ulwandle luzohlinzeka ngezinhlanzi ezimbalwa ekusetshenzisweni ngabantu nasezilwaneni zasolwandle ezisengxenyeni ephezulu kakhulu yochungechunge.
Labo abathinteka kakhulu ngokuguquka kwesimo sezulu
Ukubona umphumela wokushintsha kwesimo sezulu ochungechungeni lokudla, ucwaningo lwaphinda lwakha amaketanga afanele okudla, kusukela ezitshalweni ezidinga ukukhanya nezakhamzimba ukuze zikhule, izinambuzane ezincane ezingenamgogodla nezinhlanzi ezithile ezidlayo. Ekulingiseni, leli chungechunge lokudla lavezwa emazingeni e-acidification nokufudumala okufana nalokho okulindelwe ekupheleni kwekhulu leminyaka. Imiphumela yaba ukuthi ukuhlushwa okuphezulu kwesikhutha kwagqugquzela ukukhula kwezitshalo. Izitshalo eziningi, ama-invertebrates amancane kakhulu kanye nezinambuzane ezingenamgogodla, izinhlanzi zingakhula ngokushesha.
Kodwa-ke, ukukhuphuka kwamazinga okushisa okwenzeka njalo kwamanzi kubanga izinhlanzi zingabadli kahle ngakho-ke abakwazi ukusebenzisa amandla angeziwe akhiqizwa izitshalo. Yingakho izinhlanzi zilamba kakhulu futhi njengoba izinga lokushisa lenyuka ziqala ukuqeda isisulu sazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kuzokwenza uchungechunge lokudla lungasebenzi kahle